इजरायलले बढायो नेपाली श्रमिकको कोटा इजरायल जान के–कस्ता शर्त पूरा गर्नुपर्छ? - Himali Patrika
इजरायलले बढायो नेपाली श्रमिकको कोटा इजरायल जान के–कस्ता शर्त पूरा गर्नुपर्छ?
हिमाली पत्रिका २२ चैत्र २०७७, 4:48 pm
इजरायलले ‘केयरगिभर’मा नेपाली श्रमिकहरूको कोटा बढाएको छ। यसअघि पहिलो चरणमा केयरगिभरका लागि पाँच सय नेपाली श्रमिक लैजाने गरी ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल’मा हस्ताक्षर भएको थियो। अहिले भनेे कोटा बढाएर एक हजार नेपाली लगिने भएको हो।
इजरायल रोजगारीमा युवाको आकर्षण देखिएका बेला कोटा बढ्नु खुसीको कुरा भएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक महेन्द्रनाथ भट्टराईले बताए।
‘केयरगिभरका लागि पहिलो चरणमा एक हजार श्रमिक लैजानु खुसीको कुरा हो। इजरायल रोजगारीका लागि श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिरहेको छ। तयार भएपछि युवाहरूलाई पठाउने प्रक्रिया सुरू हुन्छ,’ निर्देशक भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायलमा केयरगिभर काममा नेपाली श्रमिक पठाउन आवश्यक कार्यविधि तयार गरिसकेको जनाएको छ। उक्त कार्यविधि क्याबिनेटमा पठाउने चरणमा रहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले बताए।
‘कार्यविधि तयार भइसकेको छ। हामी क्याबिनेटमा पठाउने चरणमा छौं। क्याबिनेटबाट स्वीकृत हुनासाथ इजरायल रोजगारीको बाटो खुल्छ,’ उनले भने।
नेपाल र इजरायलबीच गत माघमा ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल’मा हस्ताक्षर भएसँगै इजरायल जान तयारी गर्ने युवाहरू बढेका छन्। केयरगिभर तालिम लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ भने इजरायलबारे चासो राखेर दैनिक पाँच जनाभन्दा बढी युवा विभाग पुग्ने गरेको विभागले जनाएको छ।
कृषि प्रविधिमा अब्बल मानिने इजरायलमा काम तथा कमाइ राम्रो हुनाले नेपाली युवा निकै आकर्षित छन्। त्यहाँको कानुन श्रमिकमैत्री भएकाले पनि इजरायल आकर्षक बन्न सक्ने सरकारको विश्वास छ।
इजरायल जान २५ वर्ष पूरा भएर ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। उचाइ कम्तीमा १.५ मिटर तथा तौल कम्तीमा ४५ केजी हुनुपर्नेछ। इजरायल रोजगारीमा प्रवेश गर्न सिटीइभिटीबाट मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रबाट कम्तीमा ३ महिनाको केयरगिभर तालिम लिएको हुनुपर्नेछ।
नर्सिङ तालिम वा अन्य सामुदायिक औषधोपचार सहायक तालिम वा सुडेनी सम्बन्धी तालिम लिएकाहरू पनि केयरगिभर बनेर जान सक्छन्। त्यस्तै अंग्रेजी भाषामा पनि पोख्त हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ। पहिले इजरायलमा कुनै काम गरेकाहरू यो जि-टु-जी प्रणालीमार्फत जान पाउँदैनन्।
मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउँदा फ्री भिसा, फ्री टिकट व्यवस्था छ। तर इजरायल रोजगारीमा भने सरकारी संयन्त्रमार्फत् श्रमिक पठाउँदा पनि यो व्यवस्था लागू छैन।
इजरायलमा फ्री भिसा, फ्री टिकटको अभ्यास नै नरहेकाले तत्काल सो व्यवस्था लागू गर्न नसकिने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। हाल इजरायलस्थित विभिन्न क्षेत्रमा करिब तीन हजार नेपाली कार्यरत छन्। उनीहरू केयरगिभर, होटल, उद्योग, कृषि लगायत क्षेत्रमा आबद्ध छन्।
नेपालसँगको सम्झौतापछि इजरायलले पहिलो चरणमा केयरगिभरमा लैजाने भए पनि विस्तारै कृषि, उद्योग लगायत अन्य क्षेत्रमा समेत कामदार लैजाने इच्छा राखेको देखिन्छ।